विदेशी खेलाडीलाई राहत - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Not-to-be-missed विदेशी खेलाडीलाई राहत
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रिय फुटबल खेलाडी सुन्दर थापाले लगातारको लकडाउनका कारण नेपालमै अड्किएका विदेशी फुटबल खेलाडीलाई खाद्यान्न सहयोग गरेका छन् । वेस्ट काठमाडौं फुटबल क्लबका अध्यक्ष तथा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को फुटसल कमिटीका उपसंयोजक थापाले सोमबार काठमाडौंको नयाँबजारमा रहेका विदेशी खेलाडीलाई खाद्यान्न सहयोग गरेका हुन् ।
नेपालमा बसेर विभिन्न क्लबबाट शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगलगायत विभिन्न प्रतियोगिता खेल्दै आएका १० जना विदेशी खेलाडीलाई थापाले खाद्यान्न सहयोग गरेका हुन् । उनले चामल, दाल, नुन, तेल, बिस्कुटसँगै विभिन्न तरकारी सहयोग गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस ह्यारी र सनको तालमेल
थापाले नेपालमा बसेर फुटबल खेलिरहेका अन्य विदेशी खेलाडीलाई पनि रूपमा सहयोग गरिरहने जानकारी दिए । कोरोना भाइरसको सन्त्रास र लकडाउनका कारण समस्यामा परेका खेलाडीलाई सहयोग गरेकोमा विदेशी खेलाडी एरिक बोल्वेले थापालाई धन्यवाद दिएका थिए । नेपाली फुटबलमा लामो समय बिताएका थापाले लकडाउन सुरु भएसँगै विभिन्न स्थानमा राहत वितरण गरेका थिए ।
एजेन्सी - October 27, 2020
पूर्णभक्त दुवाल - April 29, 2020
बिचार डा. टीकाराम पोखरेल - May 21, 2020
विश्वव्यापी समस्याका रूपमा रहेको सीमा विवाद विश्वका धेरै देशमा छन् । नेपाल–भारतबीच रहेको सीमा विवाद कहिले चर्कने त कहिले मत्थर हुने गर्दछ । तथापि,...
प्रदेश १ ईश्वर तामाङ - September 21, 2020
प्लाज्माथेरापीले जगाएको आशा
बिचार डा. प्रकाश बुढाथोकी - August 23, 2020
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित वीर र नोवेल अस्पतालका दुई चिकित्सकको अवस्था बिग्रिएर निमोनिया भई गम्भीर बनेकामा रेमडिसिभिर तथा प्लाज्मा थेरापीपछि स्वास्थ्यमा उल्लेखीय...
गुणस्तरहिन खाना खुवाएको भन्दै कोरोना संक्रमितद्धारा खाना बहिस्कार
सप्तरी, राजविराज । प्रदेश २ सरकारले संचालनमा ल्याएको साईकृष्णा मेडिकल कलेजभित्र रहेको आइसोलेशन सेन्टरमा बसेका संक्रमितले खाना बहिष्कार गरेका छन् ।
मुलुककै सबभन्दा बढी एक...
प्रदेश १ रबिन कटेल - May 6, 2020
Breaking News प्रशान्त वली - July 10, 2020